> Resource > Android > Android carar gaabis ah? Hubi 7 Talooyin in dardar Android Si fudud
Dareen waali ah oo ku saabsan helitaanka Android u gaabiyaa gurguurto ah? Mar kasta oo aad furi app ah, aad qabtid in ay sugto ilaa ilbiriqsi waxa ay jawaab. Guur u dhexeeya screens qaata muddo dheer si redraw badan ay ahaan jireen. Ma aha in aad u dul arrintan wax ka badan. Waxaa tahay 5 talooyin waxtar leh si loo dedejiyo telefoonka Android ama kiniin sida ay tahay mid cusub.
1. Close ama Delete Apps aan la rabin
Sida aad ogtahay, barnaamijyadooda badbaadiyey ee lagu kaydiyo gudaha oo uu leeyahay oo kaliya 1 GB ama 2 boos GB. Waxaa ka fog ku filan si ay si habsami leh marka aad jeceshahay farabadan oo ku rakibidda ee Chine, gaar ahaan barnaamijyadooda ciyaarta. Maxaa ka xun, barnaamijyadooda qaar ka mid ah ay maamulaan ee asalka ah. Sida markii ay dhaco, telefoonka aad Android waddaa gaabis ah oo gaabis ah.
Haddii ay sidaa tahay, aad tirtirto karaan barnaamijyadooda la isticmaalin ama mar dhif ah loo isticmaalaa ka phone Android ama kiniin si joogto ah. Ka sokow, download iyo rakibi qaar laga daadiyo suubis ah xawaaraha Android ka Google Play, sida buustarka ee Android - FREE, du Speed ​​buusterka 丨 Cache nadiifiye, iwm in ay xirto barnaamijyadooda socda ee asalka ah. Marka aan sidaa yeelno, aad dedejin kartaa Android phone ama kiniin.
2. Nadiifi maylka adag iyo qashinka Files
Marka aad la ciyaareyso barnaamijyadooda kulan, isticmaalaysa internet, filimaan watch, iwm ku saabsan telefoonka Android ama kiniin ah, ayaa waxay abuuraysaa maylka adag iyo files junk. Maylka adag Kuwaas oo files junk dhiso waqti ka qaataan toll, ka dibna cunaan kaydinta si loo yareeyo telefoonka Android ama kiniin hoos.
Sidaa darteed, si ay u soo dedejin Android phone ama kiniin ah, waa lagama maarmaan u ah in aad si aad u nadiifiso maylka adag iyo files junk hadda kasta oo markaas. Si aad u nadiifiso app maylka adag, waxaad u tagi kartaa Settings > Tababaraha Codsiga . Tubada app aad rabto inaad nadiifiso maylka adag si ay u muujiyaan in ay screen app-Caddaynay. Markaas, ka jaftaa xogta cad cad si aad u nadiifiso maylka adag. Si aad u nadiifiso maylka adag dheeraad ah, waxaad kala soo bixi kartaa qaar ka mid ah xirfad barnaamijyadooda buusterka Android, sida MobileGo , Macallimow nadiif ah, iyo in ka badan.
Fiiro gaar ah: Marka aad maylka adag nadiif ah barnaamijyadooda, ay horumar, sida horumarka ciyaarta, tegi doonaa. Hadaba, waxa ay ula wareegaan ka hor inta wax nadiifinayaa maylka adag.
Warbixannada 3. Factory Data
Keddibna Factory caawisaa masixi ku dhowaad dhammaan xogta ku kaydsan telefoonka Android ama kiniin ah, oo wax walba ayuu soo celin in goobaha ay soo saaraha asalka ah. Just tagaan si ay Settings > celi > Factory Data celi . Waxay qaadataa hal ama laba daqiiqo. Markaas, aad telefoon Android ama kiniin la noqon doonaa oo si toos ah. Markaas, telefoonka aad Android lagu dedejisay doonaa.
Fiiro gaar ah: kaabta xogta Android aad u muhiim ah, oo ay ku jiraan xiriiro, fariimaha, barnaamijyadooda, music, video, sawiro, iyo ka badan, ka hor inta dib warshadda. Haddii kale, waxaad waayi doono wax kasta.
4. Hel Software Updates
Manufactures mararka qaar in ay telefoonada iyo kiniiniyada Android ay riixaan updates software cusub. Updates software waxay inta badan u xaliyo cayayaanka iyo kor loogu qaado adeegyada iyo software aad isticmaalayso. Sidaa darteed, haddii aad taleefan Android ama kiniin helay update Farriinta software, aadan u baahan tahay inaad ka waaban laakiin update software hadda. Si aad u hubiso update software ah, aad ku sawirnaa Settings > About qalab > update Software > Update > Xaqiiji > OK .
5. Root iyo Flash ROM ah
Jawaan ku siinayaa awood ay ku soo saarto bloatwares dheeraad ah, u qabtaan nidaamka, iftiimiyo ROM caado, iyo rakibi qaar laga daadiyo suubis Android oo u baahan inay helaan xididka. Ka sokow, rooting Android u saamaxaaya in ay overclock processer ee aad telefoon ama kiniin. Tani waxay ugu dambeyntii dedejin doonaa telefoonka Android ama kiniin ah, laakiin waxa ay sidoo kale u cuni doona juice batariga ka badan ka hor.
Fiiri sida ay u xidid Phone Android ama Tablet 1 click >>
hubi sida loo iftiimiyo ROM caadadiisu Android Phone ama kiniin ah >>
6. Guuleysatey Phone Your Android ama Tablet
Hab dhakhso ah oo fudud si loo dedejiyo telefoonka Android ama kiniin ah waa in ay dib u bilaabeyso. Tani waxay la xiro karo barnaamijyadooda orodka iyo khasnado cad. Inkasta oo hab ku meel gaar ah, ay u shaqayso.
7. Hagaaji in Phone a New ama Tablet
Phone Your Android ama kiniin weli yahay mid gaabis ah, xitaa haddii aad isku daydo oo dhan talooyin kor ku xusan? Waa hagaag, laga yaabee in la joogo waqtigii ay dayactir ku tilifoon cusub ama kiniin. Phone A cusub ama kiniin ah, gaar ahaan mid ka mid ah la version cusub, sida caadiga ah ka waddaa degdeg ah.
Si loo cusboonaysiiyo si phone cusub ama kiniin ah, waxaa laga yaabaa in aadan dooneynin inuu ka tago xogta ka dambeeya:
Hage buuxa u hesho xogta ka mid Android wareejiyo kale >>
hage A buuxa si ay u kala iibsiga xogta ka Android inay iPhone >>